About Cannapresso - Cannapresso Health Inc
CANNAPRESSO waa brand gaar ah ee alaabta hemp ku salaysan CBD dabiiciga ah ka California, qurbaankiisa sare diirada CBD oo ka soo jeeda hemp warshadaha, taas oo sharci ah oo dhan 50 gobol.
naftaada ula dhaqmaan si saliidda ugu sareeya CBD oo tayo leh ka CANNAPRESSO, oo wuxuu ku raaxaysan garanaya in aad isticmaasho alaabta Cannabidiol dhan-dabiiciga ah, soo bixiyay via habka a CO2 kiimikada-free in ay meesha nijaasta iyo macdanaha culus, isagoo yirii on-habka bey'ada ah. Isku day inaad wax ka duwan ula kala duwan ee wax soo saarka CBD kala duwan inta aad tantalize dhadhan-hari aad la kala dooran karo dhadhan delicious!
Waxaad u aamini karaa CANNAPRESSO si ay kuu siiyaan lacagta saxda ah oo saliid ah CBD oo tayo sare leh lagu daray fursadaha dhadhan fiican oo ku haboon meesha aad ku nooshahay. wax soo saarka kasta oo CANNAPRESSO xanbaarsan damaanad hubinta tayada a in Cannabidiol waa shaybaar-baaro iyo xaq halkan ka dhigay, ee USA.
CANNAPRESSO Product tilmaameedka
Address: 202 North California Ave, City of Warshadaha CA 91744 USA
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan wax soo saarka iyo qiimaha alaabta, fadlan hoos ka tago fariin, waxaan u jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood
FDA Daah : alaabta iyo Hadallada aan la qiimeeyey by FDA iyo aan loogu tala galay in la ogaado, daweeyo, daaweeyo ama looga hortago xaalad kasta, cudurka, cudur ama xaalad jireed ama maskaxeed. Alaabta Tani ma aha wax soo saarka sigaarka joojin ah oo aan la baaro sida. FDA ayaa qiimeyn amaanka ah ee badeecada ama mid ka mid ah hadalka ka soo saaraha ka dhigay this. Alaabta Tani waxaa loogu tala galay in loo isticmaalo by dadka da'da sharciga ah iyo kuwa ka weyn, oo aan lagu carruurta, ama dumarka uurka leh ama naaska quudinta, Had iyo jeer la tasho dhakhtar inta aadan bilaabin barnaamijka dheeraadka cuntada cusub.
Afeef Legal : CANNAPRESSO ma sameeyo, iibiyo ama la qaybiyo wax jira oo xad gudub ku ah Muqaadaraadka United States la kontoroolo Act (US.CSA). Cannabidiol (CBD) waa qayb dabiici ah oo saliid ah hemp.
MA for sale in DADKA da'doodu ka yar tahay 18